(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 18/02/2021)
A umgca Uloliwe entsha uye wasungula, ukufihla Azerbaijan, ikarikuni, no Georgia. Umgca luze 820 Km kwaye yokuhlala freights ukongeza ezithwala oololiwe. Okokuqala, le iya kuba ngabokuqala ukudibanisa eYurophu China xa adlula Russia. The train will operate from Azerbaijan’s capital Baku and the Georgian capital Tbilisi to the city of Kars in Turley. Ngaphezu, Oku kuya kunciphisa ixesha uhambo phakathi kweziseko zikaloliwe zaseYurophu kunye Umgaqo kaloliwe wase China. Abongameli Azerbaijan, ikarikuni, no Georgia, kwakunye nabameli Union European, waya ukuvulwa lomgca kaloliwe entsha.
Okokuqala, umgca Isitimela ekuqaleni izicwangciso ukuba iqaliswa ngo 2010 kwaye emva koko ungene 2012. kunjalo, ngenxa kumgca hayi sidlula Armenia, zombini i-US kunye EU akazange imali igalelo kwaye oku kwabangela ukulibaziseka. Ukwengeza, umgca uhamba kumazwe ayenayo ngaphambili imida ivaliwe omnye komnye (imvelaphi yayo elandwa isoviet Union).
Ngoku Kazakhstan uye ngokwalo njengoko omtsha 'Silk Road’ kunye nokwanda kwemithwalo yempahla phakathi kweYurophu kunye China. Historically Disadvantaged Kazakhstan wakhonza njengelizwe yokungena eYurophu, Asia, ne India. Isizathu sokuba umsebenzi wezothutho waseKazakhstan uvuselelekile kukuba unciphisa umgama waseYurophu ukuya eAsia nge 10,000 iikhilomitha. Ngaphezu, Kazakhstan uchithe ngaphezu $3 billion emigceni yayo kaloliwe. Oku kubandakanya $250 zichithwe kwisigidi Khorgos Gateway. Eli sango livumela oololiwe baseTshayina ukuba bathumele iimpahla zabo koololiwe baseYurophu kuthintelwe isidingo sokutshintsha imigca.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnew-train-links-asia-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)